Global Voices teny Malagasy » Tsy Fotoanan’ny Fanaovana Akanjobà Misy Sary Maritoa sy Antsimbilona Izao Any Indonezia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Mey 2016 15:27 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nampidirina am-ponja  ireo mpikatroka mafana fo roa tany Mollucas noho ny nanaovan'izy ireo akanjobà misy ny sary famantarana “Partai Kopi Indonesia” (Antoko Kafe Indoneziana). Araka ny polisy, mitovy amin'ny voalohan'anaran'ilay Antoko Kaominista Indoneziana (PKI) efa maty amin'izao ilay fango famantarana, na mitodika amin'ireo mpitia kafe aza ilay akanjobà.
Mandritra izany, nosamborina ihany koa ny tompon'ilay fivarotana fahatsiarovana sy ireo mpiasany, noho ny fivarotana akanjobà an'ilay vondrona Alemàna mpiangaly mozika metaly, Kreator, izay ahitàna  ny fango famantarana maritoa sy antsimbilona.
Ny volana Febroary tamin'ity taona ity, nofoanana  ny Belok Kiri Fest (Turn Left Fest), izay nokarakaraina mba hiresadresahana ireo hevitry ny ankavia, taorian'ny nandavan'ny polisy ny fahazoandàlany.
Any Indonezia, atao toy ny fotokevitra mihoapefy ary rahona ho an'ny filaminam-pirenena ny kaominisma sy ny marksisma. Afaka atao ho toy ny famadihan-tanindrazana araka ny Lalàna Indoneziana nasiam-panovàna  Momba ny Heloka Bevava izay hetsika rehetra na fanohanana ny Kaominisma, Marksisma na Leninisma. Afaka miampanga  ny asan'izay mpikaroka manoratra momba ny kaominisma mihitsy aza ilay lalàna.
Mino  ireo mpiandraikitra miaramila fa misy tetidratsy  hamadihana mba hamelomana indray ireo vondrona kaominista ao amin'ny firenena, fa mieritreritra kosa ireo mpanadihady sasany fa miezaka ny hamotika ireo hetsika fotsiny ny miaramila mba handrefesany ny fanoherana kaominista ny taona 1965, izay nitondra ho amin'ny fahafatesana olona iray hetsy noahiahiana ho kaominista ary ireo mpanaraka azy nanerana an'i Indonezia.
Nampangaina ho namolavola famonoan'olona faobe  ny miaramila, izay nitondra tamin'ny fiakaran'ny Jeneraly Suharto teo amin'ny fitondrana. Eo ankilany, milaza ireo miaramila fa fiarovantena nanoherana ny fanafihan'ireo kaominista iny.
Ho valin'ireo fisamborana nanao tohivakana tato ho ato, nangataka  ny fampiharana ny lalàna i Jokowi mba hampitsaharana izay mety ho ezaka entina hamelomana indray ny antoko kaominista, saingy nanainga azy ireo kosa hanaja ny zon'olombelona sy ny fahalalahana hiteny.
Ho an'ilay Silamo mpikaroka, Akhmad Sahal , misy fomba tsaratsara kokoa entina hiadiana ny kaominisma noho ny fisamborana ireo ahiahiana ho kaominista:
Any Indonezia, mahazatra ny maheno ireo tomponandraiki-panjakana mampifandray ny kaominisma sy ny vondrona LGBT amin'ny fampihorohoroana. Lazaina  matetika aza ireo ho hevitra hanakorontanana ny firaisana sy ny fiandrianam-pirenena. Manohitra io fisainana mantsotsotra zavatra io ireo sasany mpampiasa Twitter :
Tsy ho faty noho ny fandrahonana avy amin'ny [vondrona fivavahana mahery fihetsika] Mandatehezana Fiarovana Silamo  (FPI), ny Marksisma. Ho faty ny Marksisma rehefa lasa fotokevitra itompoana. Mitovy amin'ireo boky masina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/25/83188/
 nampidirina am-ponja: http://jakarta.coconuts.co/2016/05/16/jailed-activists-accused-spreading-communism-wearing-pecinta-kopi-indonesia-pki-t-shirt
 famonoan'olona faobe: https://globalvoices.org/2015/10/29/women-survivors-speak-out-about-indonesias-1965-mass-killings/
 Mandatehezana Fiarovana Silamo: https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Defenders_Front